Sei mawiricheya achidhura? | Karman® Mawiricheya
Mawiricheya dzakavakwa nehunyanzvi hwepamusoro-soro hunogona kubatsira kurerutsa hupenyu hwevanhu vasingakwanise kufamba. Nekuda kwehupamhi hwehunyanzvi hwetekinoroji, zviwanikwa, uye mitengo yekuvaka inoiswa pamusoro pane yemanyorero mavhiripu. Vanhu vazhinji havanzwisise mafambiro ekuti a wiricheya inovakwa uye ine maitiro ekuyedza.
Pane zvakawanda kutsvagisa kwakazvipira kune kugadzira mawiricheya kune zvakasiyana zvinodiwa kuitira kuti yega wiricheya inogona kugadzirisa yemushandisi upenyu. Mamwe magadzirirwo anobatsira kuvandudza kufamba kunyanya munzvimbo dzekunze nepo vamwe vachitarisana nekuenderana kubvumidza vashandisi kufamba kunyange nenzvimbo yakaoma. Zvimwe zvinotarisisa zvekugadzira zvakafanana nekuona kuti ndizvo lightweight asi ramba uchidzidza kuve nechokwadi chekushandisa kwenguva yakareba. Kazhinji kacho mavhiripu gadzira kutarisisa mukupa nyaradzo kune vashandisi avo dzimwe nguva vanopedza maawa mazhinji pachigaro.
With the kugona kungogadzira nekutengesa avhareji ye20,000 pagore, izvi hazvibvumidze kudzikiswa mitengo. Uye zvakare, chiremba wako aifanira kunyorera zvakasarudzika vatengi kuitira kuti awane akanakisa midziyo. Izvi zvinogona kubatsira kugadzirisa mamiriro or kudzivirira zvitsva kubva pakuitika.
Vashandisi vanowana iyo mawiricheya akaendeswa kwavari uko kunoedzwa kuve nechokwadi chekuti sarudzo yakawona yakanyanya kumunakira. Kana vaendeswa vanofanirwa kuisa iyo wiricheya yemushandisi uye inogona kuona kuti vangoverengerwa kushandisa bhodhi.
Ivo vanofanirwa kuyedza zvese mavhiripu kuona kuti hapana chinokanganisa mukati me wiricheya. Mimwe bvunzo inosanganisirwa kuitira kuti mavhiripu kutenderwa neFDA ndeyekutenderera kuyedzwa kwemavhiri ekuyedza durability, kudonha bvunzo saka bvunzo kukanganisa uye dhizaini dhizaini. Chekupedzisira, imwe bvunzo inosanganisira yemagetsi chikamu chayo kuona iyo upenyu a wiricheya inosangana nehuremu hwavo kuti vawane mvumo.
Izvi zvikonzero zvinobatsira muverengi kuziva padanho rega kuti nei wiricheya yemagetsi inogona kunge iri pamusoro priced tichienzanisa ne Chichemo chemaoko. Kune zvakawanda zvinovhiringidza iyo mawiricheya emagetsi ndinofanira kurwisa izvo mari mari. Vagadziri, nyanzvi, uye chitupa mutengo mari yakawanda inokonzera magetsi chair prices kusimuka nekugara pane imwe nhanho.